Ukulawulwa Kwezinambuzane Ukuthengisa Nokuqasha in London
Ukulawulwa Kwezinambuzane in London
Ishicilelwe ngu Pest Control Companies London
ukubuka Ukulawulwa Kwezinambuzane eshicilelwe 1 month ago
Ukulawulwa kwezinambuzane kuyinto emidala kakhulu kwezolimo, njengoba bekulokhu kunesidingo sokugcina izitshalo zingabi nezinambuzane. Ukuze wandise ukukhiqizwa kokudla, kunenzuzo ukuvikela izitshalo ezinhlotsheni zezitshalo ezincintisanayo, kanye nakuma-herbivores ancintisana nabantu. Indlela evamile kungenzeka ukuthi yayiqala ukuqashwa, ngoba kulula ukuqeda ukhula ngokuwushisa noma ngokulima ngaphansi, nokubulala imifino emikhulu yokuncintisana, njengamaqhude nezinye izinyoni ezidla imbewu. Amasu wokushintshana njengokushintshana kwezilimo, ukutshala umngani (okwaziwa nangokuthi ukucubungula noma ukungunda ngokuxubile), nokusabalalisa okukhethiwe kwezinhlobo zezitshalo ezilwa nezinambuzane zinomlando omude. E-UK, ukukhathazeka okulandelayo ngenhlala-kahle yezilwane, ukulawulwa kwezinambuzane nokuhlanzeka kutholakala ekusebenziseni isayense yezilwane kunokubhujiswa. Isibonelo, ne-fox ebomvu yasemadolobheni okuyiyona ndlela yokuziphatha yasendaweni esetshenziselwa ukumelana nesilwane, imvamisa ngokuhlangana nokuphindisela okungamakhemikhali ngamakhemikhali. Ezindaweni zasemakhaya zaseBrithani, ukusetshenziswa kwezibhamu zokulawula izinambuzane kuvame kakhulu. Ama-airguns aziwa kakhulu ngokulawula izinambuzane ezincane ezinjengamagundane, onogwaja kanye nama-squirrel ama-grey, ngenxa yamandla awo aphansi angasetshenziswa ezindaweni ezivinjelwe kakhulu njengezingadi, lapho ukusebenzisa isibhamu kungaphephile.